OPPO Reno5 | OPPO မြန်မာ
ပုံရိပ်နှင့် နောက်ခံဗီဒီယိုကို လိုက်ဖက်ညီအောင် ရောနှော၍ အနုပညာမြောက်သော ဗီဒီယိုများ ဖန်တီးနိုင်ပါပြီ။1
အကောင်းဆုံး ဗီဒီယိုများဖန်တီးရန် ရှုထောင့်များရွေးချယ်ရန် မလိုအပ်တော့ပါ - မိမိရိုက်ကူးသော ပုံရိပ်နှင့်နောက်ခံ မြင်ကွင်းနှစ်ဖက်လုံး၏ လှုပ်ရှားမှုများအား တပြိုင်နက် မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးနိုင်ပါပြီ။
အလင်းမှိန်မှိန် သို့မဟုတ် အနောက်ဘက်မှ မီးထိုးသောဓါတ်ပုံရိုက်ကူးမှုများတွင်ပင် ဗီဒီယိုများကို ထင်ရှားတောက်ပစွာ ရိုက်ကူးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အားသွင်းဖို့ အချိန် ၅ မိနစ်သာရှိပါသလား။ သင့်အနေဖြင့် ၃ နာရီကြာ ဗီဒီယိုကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။2
Video ကို ပြန်လည်ပြသမည်
တစ်စက္ကန့်အတွင်း မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပုံရိပ်ထင်နိုင်သည့်နှုန်း 90Hz ရှိသဖြင့် မြင်ကွင်းများအားလုံး ပိုမိုချောမွေ့ပြေပြစ်ရုံမျှမက လျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းလည်းရှိပါသည်။
တစ်စက္ကန့်အတွင်း မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပုံရိပ်ထင်နိုင်သည့်နှုန်း 90Hz ရှိသဖြင့် မြင်ကွင်းများအားလုံး ပိုမိုချောမွေ့ပြေပြစ်ရုံမျှမက လျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းလည်းရှိပါသည်။3
Reno5 အကြောင်း ပို၍လေ့လာမည်
Available Now for 499,900 MMK
AI နည်းပညာဖြင့် ဆရာကျကျ အလှဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း
AI နည်းပညာဖြင့် ဆရာကျကျ
မည်သည့်ဗီဒီယိုနောက်ခံနှင့်မဆို သင့်ပုံရိပ်ကို အကောင်းဆုံး ပေါင်းစပ်ပေးနိုင်ခြင်း - အခြား နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊ လှပသော ရှုမျှော်ခင်း သို့မဟုတ် ဆန်းကြယ်သောစိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာ စသည့်နောက်ခံများကို သင့်စိတ်ကြိုက် အသုံးပြုကြည့်ပါ။ ထူးခြားလိုက်ဖက်အောင် ပေါင်းစပ်ပေးနိုင်သည့်စွမ်းရည်က သင်ဖန်တီးသော ဇာတ်လမ်းတိုင်းကို အနုပညာမြောက် လှပနေအောင် အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ပေးပါလိမ့်မည်။
အချိန်နှင့်တပြေးညီ မှတ်တမ်းတင်ပေးနေမည်ဖြစ်သည်။ ကင်မရာရှုထောင့် ၂ မျိုးလုံးမှ သင်၏ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် အပြန်အလှန်လှုပ်ရှားမှုများကို ဗီဒီယိုအဖြစ် အကောင်းဆုံး မှတ်တမ်းတင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မည်သည့် အလင်းရောင်တွင်မဆို ပြတ်ပြတ်သားသား
ဗီဒီယိုတိုင်းတွင် သင့်ကို အမြဲတောက်ပနေအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း - အကောင်းဆုံးသော အလင်းရောင်အနေအထား မရရှိသည့်တိုင် လှပစွာ ရိုက်ကူးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ AI နည်းပညာသုံး ဗီဒီယိုများတွင် အလိုအလျောက် ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော နည်းပညာက အလင်းရောင်အနေအထားကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးနိုင်ပြီး ရှင်းလင်းပြတ်သားသော ဗီဒီယိုရရှိအောင် အကောင်းဆုံးအဖြေရှာ ချိန်ညှိပေးနိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့် အလင်းရောင်မှိန်သောနေရာများနှင့် ပုံရိပ်အနောက်ဖက်မှ အလင်းပေးသော ရိုက်ကူးရေးများကိုပင် ကောင်းစွာရိုက်ကူးလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင့်အတွက် အဟန့်အတားများ မဖြစ်နိုင်တော့ပါ
ညချမ်းအချိန်တွင် ရိုက်ကူးသော ဗီဒီယိုနှင့် selfie များအတွက် ပြီးပြည်စုံအောင် ချိန်ညှိထားရှိသော ကာလာအရောင်များနှင့် သင့်အတွက် မှော်ဆန်သော ညချမ်းအလှကို ဆောင်ကြဉ်းပေးပါလိမ့်မည်။
Live HDR သည် အလင်းစူးသောနေရာများအား အလွန်အကျွံဖော်ပြခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘဲ မှောင်သောနေရာများကိုပါ အသေးစိတ်မြင်နိုင်အောင် ချိန်ညှိပေးပါသည်။ ရိုက်ကူးလိုသောပုံရိပ်၏ အနောက်ဘက်မှ အလင်းပြောင်းပြန်ထိုးသည့်အချိန်များတွင်ပင် သင်ရိုက်ယူလိုသော ပုံရိပ်ကို အသေးစိတ်များကို ထင်ထင်ရှားရှားရိုက်ကူးပေးနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
သင်ရိုက်ကူးလိုသောပုံရိပ်အား အဓိကထားပုံဖော်ပေးပြီး ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အပြိုင်အရောင်များအား အဖြူအမဲ နောက်ခံဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
ဗီဒီယိုများရိုက်ကူးပြီးနောက် Soloop တွင် တည်းဖြတ်ခြင်းကို နှိပ်ပေးရုံဖြင့် Soloop မှ ဗီဒီယိုများအား ပြီးပြည့်စုံမှုရှိအောင် အလိုအလျောက်တည်းဖြတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ သင့်ဗီဒီယိုများသည်လည်း သင်အနှစ်သက်ဆုံး influencer များ ရိုက်ကူးသော ဗီဒီယိုများကဲ့သို့ပင် မှတ်မှတ်ထင်ထင်ရှိနေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဓါတ်ပုံများသည် ဖုန်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များအား ဖော်ပြရန် အတွက်သာဖြစ်ပြီး ဓါတ်ပုံများတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားသော ဒီဇိုင်းနှင့်
အဝတ်အစားများသည် မည်သည့်တွဲဖက်ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ် သို့မဟုတ် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုမှ ရည်ညွှန်းဖော်ပြထားခြင်းမဟုတ်ပါ။
ရိုက်ချက်တိုင်းအတွက် ပြစ်ချက်ကင်းလွန်းသော အရောင်အသွေးများ
အလှဓါတ်ပုံရိုက်ကူးရာတွင် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် မီးများအဖြစ် ဖန်တီးပေးခြင်း
ပုံရိပ်တစ်ခုလျှင် 108 megapixels ပါဝင်သောကြောင့် သင့်ဓါတ်ပုံကို ပြင်ပသက်ရှိလောကကဲ့သို့ပင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အံသြဖွယ်ရာများစွာကို တွေ့မြင်ခံစားနိုင်ဖို့ လက်ချောင်းလေးဖြင့် ဆွဲချဲ့ကြည့်လိုက်ပါ။
AI နည်းပညာသုံး ပုံရိပ်များကို ခွဲခြားပြုပြင်ပေးသည့်စနစ်က မတူညီသော ပုံရိပ်များကို ဓါတ်ပုံအနုပညာမြောက်စွာ ခွဲခြားပြုပြင်ပေးပြီး အရောင်များအား နေရာတကျရှိစေရန် စီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ညဘက် အလှရိုက်ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးရာတွင် နောက်ခံရှိအလင်းရောင်လေးများကို ဝေဝါးသော မီးများဖြစ်အောင် ဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့် ရိုက်ကူးသောပုံရိပ်၏ အလင်းရောင်ကို ချိန်ညှိပေးပြီး ပုံရိပ်ကို ပိုမိုထင်ရှားစေပါသည်။
ဓါတ်ပုံများသည် ဖုန်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များအား ဖော်ပြရန် အတွက်သာဖြစ်ပြီး ဓါတ်ပုံများတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားသော ဒီဇိုင်းနှင့် အဝတ်အစားများသည် မည်သည့်တွဲဖက်ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ် သို့မဟုတ် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုမှ ရည်ညွှန်းဖော်ပြထားခြင်းမဟုတ်ပါ။
လျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်သော 50W Flash Charge နှင့် 4310mAh4 ဘက်ထရီ ပါဝင်သောကြောင့် ၅ မိနစ်ကြာ အားသွင်းရုံဖြင့် ၃ နာရီကြာ ဗီဒီယိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ထို့ထက်ပိုမိုလိုအပ်ပါသလား။ ၄၈ မိနစ်အတွင်းမှာပင် ၁၀၀% အပြည့် အားသွင်းပေးနိုင်ပါသည်။5
* OPPO Reno5 တွင် အလျင်အမြန်အားသွင်းနိုင်သော 65W SuperVOOC အားသွင်းခေါင်းပါဝင်ပြီး 50W Flash Charge ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သောကြောင့် အားသွင်းနှုန်းမြန်ဆန်မှုနှင့် လုံခြုံစိတ်ချရမှုအပြည့်အဝ ရရှိစေပါသည်။
ဘက်ထရီပမာဏ ၅% တည်းဖြင့် ၂ နာရီကြာ Whatsapp အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။6
ဘက်ထရီကို ချိန်ညှိပေးနိုင်သောကြောင့် ညလုံးပေါက် အားသွင်းထားနိုင်ပါသည်။
အလွှာ ၅ ခု ပါဝင်သော အားသွင်းခြင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်
လုံခြုံစိတ်ချရသော အားသွင်းခြင်းစနစ်အတွက် Reno5 တွင် ပါဝင်သော အပူစွန့်ထုတ်ပေးသည့်စနစ်သည် အားသွင်းလျက် ဂိမ်းကစားနေသည့်တိုင် ဖုန်းကိုအေးမြစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ထို့အပြင် ဘေးအန္တရာယ်များမဖြစ်ပေါ်စေရန် ဘက်ထရီမှ အားသွင်းခေါင်းအထိ အလွှာ ၅ ခု ပါဝင်သော အကာအကွယ်ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။
AI နည်းပညာသုံး ပုံရိပ်များကို ခွဲခြား၍ လှပအောင် တွက်ချက်ပြုပြင်ပေးခြင်း
ဖုန်းကို လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အသိဉာဏ်များထည့်ပေးခြင်း
လက်သင်္ကေတအသုံးပြု၍ အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် ဖုန်းဖြေဆိုခြင်း၊ အသံပိတ်ခြင်း နှင့် သင်အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး လူမှုကွန်ယက် app များကို လှန်လှောကြည့်ရှုခြင်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက် စမတ်ကျသော စာတိုအချက်ပြ
Reno5 တွင် ဝင်ရောက်လာသော စာတိုအသိပေးချက်များနှင့် အသိပေးဘားတန်းအား သင်မှ ဖော်ပြရန် မလုပ်ဆောင်မချင်း အခြားသူ မဖတ်ရှုနိုင်ရန် အလိုအလျောက် ဖုံးအုပ်ပေးထားပါသည်။
တွေ့မြင်နိုင်သော ပိုမိုညက်ညောသည့် လှုပ်ရှားမှု
တစ်စက္ကန့်အတွင်း ဖုန်းမျက်နှာပြင်တွင် ဖော်ပြနိုင်သည့် refresh rate 90Hz သည် မြင်ကွင်းများအား ပိုမိုချောမွေ့သော ခံစားမှုရရှိအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါသည် - သတင်းပေးပို့ချက်အသစ်များကို ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ဂိမ်းကစားခြင်း။ တစ်စက္ကန့်အတွင်း လက်ချောင်းများ၏ ထိတွေ့ခြင်းကို ဖမ်းယူန်ိုင်သည့်နှုန်း touch sampling rate 180Hz ပါဝင်သည့်အတွက် တစ်ချက်ထိတွေ့ရုံဖြင့် လျင်မြန်သော တုန့်ပြန်မှုကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အရာအားလုံးကို အဆင်တပြေ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း
8nm-class Snapdragon 720G processor ၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် Reno5 အား app မျိုးစုံကို တပြိုင်နက်အသုံးပြုရာတွင် lag ခြင်း မဖြစ်ပေါ်စေပဲ ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ထို့အပြင် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် ပိုမိုမြန်ဆန်စေရုံမျှမက 8GB RAM နှင့် 128GB ROM တို့ပါဝင်သောကြောင့် ပိုမိုဝင်ဆံ့ပါသည်။
ပြီးပြည့်စုံအောင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ချိန်ညှိခြင်း၏ ရလဒ်အဖြစ် Reno5 ၏ အပေါ်ထပ် အလွှာကို ပိုမိုတောက်ပလှပစေရုံမျှမက လက်ရာထင်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်န်ိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
တောက်ပသော PICASUS အလွှာ ပါဝင်သောကြောင့် ငွေရောင်အသွင် အရောင်အသွေးစုံရောယှက်တောက်ပ လှပစေပါသည်။
ကြယ်ရောင်များနှင့် ပြည့်နှက်နေသော အနက်ရောင် စကြာဝဌာကြီးအတွင်း ဝင်ရောက်သလို ခံစားရရှိစေပါသည်။
Reno5 ၏ ကိုယ်ထည်သည် ပါးလွှာပေါ့ပါးပြီး ချောမွေ့မှုရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင့်လက်ဖဝါးအတွင်း သက်တောင့်သက်သာနှင့် ကိုင်တွယ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး အိတ်ထဲတွင်လည်း အလွယ်တကူ သယ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် သင့်လက်အား ညောင်းညာခြင်းမဖြစ်စေဘဲ သင့်နှလုံးသားကို သိမ်းပိုက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
နေရောင်အောက်တွင်ပင် ကောင်းစွာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ညအချိန်တွင်လည်း သင့်မျက်လုံးကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပါသည်။ ဖုန်းမှထွက်ပေါ်သော အပြာရောင်အလင်းတန်းများကို လျှော့ချပေးထားသောကြောင့် မျက်လုံးညာင်းညာခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်ပါ။ ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုနှင့် နှစ်သက်သော ပွဲများအား အရောင်စိုစိုနှင့် ကြွကြွရွရွ ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
HD ပွဲများသည် သင့်လက်တစ်ကမ်းတွင်သာရှိသည်
Netflix HD ထောက်ခံချက် & Amazon Prime Video HD ထောက်ခံချက်
သင်အကြိုက်အနှစ်သက်ဆုံး ပွဲများကို HD ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းအတွက် Netflix HD ထောက်ခံချက်နှင့် Amazon Prime Video HD ထောက်ခံချက်များကို ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။
Dolby Atmos ဖြင့် သီချင်းများ၊ ဗီဒီယိုများအား သင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ခံစားကြည့်လိုက်ပါ။
အသုံးပြုလက်စ app ကို ဆွဲချုံ့ထားနိုင်သော FlexDrop
Google Lens ဖြင့် ဘာသာပြန်န်ိုင်ရန် လက်သုံးချောင်းသာ လိုအပ်ပါသည်
အသုံးပြုလက်စ app ကို ချုံ့၍ရွေ့နိုင်ခြင်း၊ ဝင်းဒိုးအသေးအနေဖြင့် ဖွင့်ထားနိုင်ခြင်းကြောင့် သင့်အနေနှင့် အခြား app တစ်ခုကို အသုံးပြုစဉ်မှာပင် ဖွင့်လက်စ app အား မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်န်ိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဖုန်းမျက်နှာပြင်အား screenshot ဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် ဘေးဘားတန်းကိုဖွင့်၍ Google Lens ဖြင့် ဘာသာပြန်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ပါပြီ။
ဂိမ်းတွင် အနိုင်ရရှိဖို့ လုံးပမ်းနေစဉ်ကာလအတွင်း အခြားပြင်ပအရာများမှ ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ခြင်းမပြုနိုင်ရန် ယာယီပိတ်ထားလိုက်ပါ။
Apps များကို အသုံးပြုစဉ် အသိပေးစာတိုများကို ဖုံးကွယ်ခြင်းအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် နောက်ခံမပါရှိပဲ စာသားဖြင့်သာ လက်ယာမှ လက်ဝဲဘက်သို့စာတမ်းထိုးပြသပေးပါသည်။
ဂိမ်းဆော့ဖို့ အလျင်လိုနေပါသလား။ တစ်ချက်တို့ထိရုံဖြင့် ဂိမ်းများရှိသော စာမျက်နှာသို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်နိုင်ပါပြီ။
ကစားမည့်ဂိမ်းနှင့် အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်မည့် သွက်လက်မှုနှင့် ထိတွေ့တုန့်ပြန်နိုင်သည့် အဆင့်ကို စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိလုပ်ဆောင် နိုင်ပါသည်။
မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အမြဲပြသလိုသည့် အကြောင်းအရာများ၊ နေရာအခင်းအကျင်းနှင့် အရောင်များကို သင့်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည် - သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တ်ိုင် ဒီဇိုင်းဆွဲလိုက်ပါ။
မြင်ကွင်းများအားလုံး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်အတွက် အခြားပြင်ပ apps များတွင် အဆင့် ၃ ဆင့်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
1.AI နည်းပညာ ရောနှောထားသော အလှဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို OPPO Reno5 စက်ပစ္စည်းများ၏ ပထမအသုတ်တွင် ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ OTA အဆင့်မြင့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်သာ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
2.ယခုဖော်ပြပါ စာသားများအား TÜV Rheinland မှ ထောက်ခံချက်ပေးထားပြီး စမ်းသပ်ခန်းတွင် စမ်းသပ်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်မည့် ရလဒ်သည် စမ်းသပ်သည့် ပါတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အနည်းငယ် ကွဲလွဲနိုင်သည်။
3.Setting တွင် 90Hz သို့မဟုတ် 60Hz ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ 90Hz mode ကို ရွေးချယ်ပါက အချို့သော app များတွင် လိုက်ဖက်ညီအောင် ဆောင်ရွက်ရသောကြောင့် refresh rate သည် 60Hz သာ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
4.4310mAh သည် ဘက်ထရီ၏ ပျမ်းမျှတန်ဖိုးဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံး စွမ်းဆောင်နိုင်မှု capacity မှာ 4220mAh ဖြစ်သည်။
5.OPPO ၏ စစ်ဆေးတိုင်းတာချက်များအရ OPPO Reno5 ကို ၁၀၀% အားပြည့်ရန် ၄၈ မိနစ်သာ လိုအပ်သည်။ အမှန်တကယ် အားသွင်းရမည့်ကြာချိန်သည် စက်ပစ္စည်း၏ သီးခြားအခြေအနေနှင့် မတူကွဲပြားမှုများအပေါ်မူတည်၍ အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်သည်။ အခန်းအပူချိန်၊ ဘက်ထရီကို အသုံးပြုပြီးနောက် စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်း။
6. စမ်းသပ်ချက်များကို OPPO ၏ စမ်းသပ်ခန်းအတွင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီ၏ လက်ကျန်အားပမာဏကိုဖော်ပြရာတွင် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့် တစ်ခုအကြား အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်သည်။ စမ်းသပ်ရာတွင် ပိုမိုတိကျမှုရှိစေရန်အတွက် ၅% ဘက်ထရီအားသည် 4310mAh ၏ ၅% ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး 215.5mAh ရှိသည်။
7. Smart AirControl ကို Facebook, Instagram, TikTok နှင့် YouTube တို့တွင်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ Smart AirControl ဖြင့် ဖုန်းဖြေဆိုခြင်းကို အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဗီဒီယိုဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ အခြားပြင်ပ app များဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းတို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ရန်အတွက် Settings > Convenience Tools > Gestures & Motions > Air Gestures.
8. Touch sampling rate 180Hz ကို အချို့အခြေအနေများတွင်သာ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 120Hz touch sampling rate ကို အခြားအခြေအနေများတွင် အသုံးပြုသည်။
9. OPPO Reno5 ၏ Fantasy Silver ကို Reno Glow process ကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဖုန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြား အရောင်နှင့် အသေးစိပ် လုပ်ဆောင်ချက်များ အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်ခြေရှိသည်။
10. OPPO Reno5 ၏ Fantasy Silver သည် 7.8mm အထူရှိပြီး Starry Black သည် 7.7mm အထူရှိသည်။ OPPO Reno5 ၏ အထူနှင့်အလေးချိန်ကို OPPO စမ်းသပ်ခန်းအတွင်းမှ ရရှိသော အချက်အလက်များအပေါ်တွင် အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်ထွက်ရှိလာသော ကုန်ပစ္စည်း၏ အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်သည် ထုတ်လုပ်သည့် အဆင့်နှင့်တိုင်းတာသည့် နည်းလမ်းပေါ်မူတည်၍ အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်သည်။
11. ဖုန်းမျက်နှာပြင်အရွယ်ကို ထောင့်ဖြတ်အနေအထားတွင် တိုင်းယူရရှိသော အလျားဖြစ်ပြီး စင်တီမီတာဖြင့်တိုင်းတာသည်။ Reno5 ၏ ဖုန်းမျက်နှာပြင်အရွယ်သည် 6.4 လက်မရှိပြီး ထောင့်မှန်စတုဂံအပြည့်ဖြစ်သည်။ ဖုန်းမျက်နှာပြင်နှင့် ကိုယ်ထည်၏အချိုးသည် ၉၁.၇% (လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော ဧရိယာ) ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် ကြည့်ရှုနိုင်သော ဧရိယာသည် ထောင့်ချိုးအဝိုင်းနှင့် ကင်မရာအပေါက်များနေရာယူခြင်းကြောင့်အနည်းငယ်လျော့နည်းနိုင်သည်။
12. ထုတ်ကုန်၏ ဓါတ်ပုံများသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာဖြစ်သည်။ အချို့သော ကုန်ပစ္စည်းများ၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ဖော်ပြချက်များသည် ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူအပြောင်းအလဲကြောင့် အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ ထုတ်ကုန် အမှန်တကယ်ထွက်ရှိလာချိန်တွင် ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သော ဖော်ပြချက်များကိုသာ အတည်ပြုရန်ဖြစ်သည်။
13. ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ပါတ်သက်သော ဖော်ပြချက် အချက်အလက်များသည် OPPO ၏ နည်းပညာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ စမ်းသပ်ခန်းမှရရှိသော စမ်းသပ်ချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများထံမှ ရယူထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စမ်းသပ်သည့် ဆော့ဝဲလ်ဗားရှင်း၊ စမ်းသပ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စက်ပစ္စည်းဗားရှင်းစသည့် လက်တွေ့အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အချက်အလက်များအနည်းငယ် ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။